Politika fandefasana sy famerenam-bola
Ireo mpamatsy dia mety (indrindra amin'ny baiko manokana) mitaky fotoana fikarakarana fanampiny alohan'ny fandefasana entana. Hampandrenesina ireo mpanjifa amin'izany toe-javatra izany. Ny fotoana fanodinana antonony avy amin'ny mpamatsy dia eo anelanelan'ny 1 ka hatramin'ny 5 andro. Miankina amin'ny toerana aleha any Etazonia na iraisampirenena, azafady mamela eo anelanelan'ny 1 ka hatramin'ny 14 andro ny fahatongavanao (miankina amin'ny fomba fandefasana entana). Ny kaomandin'ny vokatra ao Etazonia dia manana fe-potoana fohy. Raha mihoatra ny 20 andro no lasa dia andefaso mailaka izahay [email voaaro] hijerena ny satan'ny kaomandinao.
Ny politikantsika dia maharitra ny andro 30. Raha efa nandeha ny andro 30 hatramin'ny fanànanao, indrisy, tsy afaka manolotra anao famerenana na fifanakalozana ianao.
Mba hahazoana ny fiverenana dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fomba tsy ampiasaina sy ny toe-javatra efa azonao izany. Tsy maintsy ao anaty fonosana voalohany ihany koa izy.
Maro ireo karazan-karazana entana tsy voavonjy. Ny entana toy ny sakafo, voninkazo, gazety na gazety dia tsy azo averina. Tsy ekentsika koa ny vokatra entina na entam-barotra, fitaovana mampidi-doza, na ranon-drano na gaza.
Fanaterana fanampiny tsy azo havaozina:
Mba hamenoana ny fiverenanao dia mila receipt na porofo momba ny fividianana izahay.
Azafady azafady alefa any amin'ny mpanamboatra ny fividiananao.
Misy toe-javatra sasantsasany izay manome alalana ampahany ihany (raha ilaina)
Boky misy marika fampiasa
CD, DVD, VHS, rindrambaiko, lalao video, kasety kasety, na rakitsoratra vinyl izay nosokafana
Ny singa rehetra tsy ao amin'ny toetrany tany am-boalohany, dia faritra simba na tsy hita ho an'ny antony tsy noho ny fahadisoantsika
Izay rehetra naverina dia mihoatra noho ny 30 andro taorian'ny fiterahana
Refunds (raha azo atao)
Raha vantany vao voaray sy nijery ny fiverenanao, dia handefa mailaka izahay hampahafantaranao fa nahazo ny zavatra naverinay ianareo. Hanamarika anao ihany koa ny fankatoavana na ny fandavana ny volanao.
Raha ankatoavina ianao, dia hajanona ny volanao, ary ny fampindramam-bola dia ampiharina avy hatrany amin'ny karatra fiasanao na ny fomba amam-panao voalohany, ao anatin'ny fotoana maromaro.
Tara na tsy hita refunds (raha azo atao)
Raha mbola tsy nahazo vola ianao dia jereo indray ny kaontinao amin'ny banky.
Avy eo dia manorata amin'ny orinasa momba ny carte de crédit, fa mety haka fotoana kely alohan'ny hamoahana ny volanao amin'ny fomba ofisialy.
Mifandraisa amin'ny banky manaraka. Matetika dia misy fotoana fanaraha-maso alohan'ny hividianana refy.
Raha nahavita an'izany rehetra izany ianao ary mbola tsy nahazo ny volanao dia miangavy anao hifandray aminay [email voaaro]
Fivarotana zavatra (raha misy)
Ireo zavatra tsy tapaka dia azo averina alaina, indrisy fa ny fivarotana zavatra tsy azo averina.
Fifanakalozana (raha azo atao)
Soloinay ihany ny entana raha misy simba na simba. Raha mila manakalo an'io zavatra mitovy io ianao dia andefaso mailaka izahay at [email voaaro] ary alefaso amin'ny:
Trivoshop Inc- Miverina
Raha voamarika ho toy ny fanomezam-pahasoavana ny entana rehefa nividy sy nalefa mivantana aminao, dia hahazo valisoa fanomezan-danja ianao noho ny sandan'ny fiverenanao. Raha vantany vao voaray ny taratasy voarainao, dia hisy taratasy fanamarinana fanomezana alefa ho anao.
Raha toa ka tsy voamarina ho toy ny fanomezana ny entana rehefa novidina, na ny mpanome fanomezana dia nandefa ny baiko navotsotra ho an'ny tenany mba hanome anao taty aoriana, handefa refundy ny fanomezana mpanome ary ho hitany ny momba ny fiverenanao.
Mba hamerenanao ny vokatrao dia alefaso any amin'ny:
Ho tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny saram-pandefasana manokana ianao amin'ny famerenana ny zavatrao. Ny sandan'ny fandefasana dia tsy azo aloa. Raha raisinao ny refundia, ny fandaniana amin'ny fandefasana entana dia azo alaina avy amin'ny volanao.
Miankina amin'ny toerana misy anao, ny vanim-potoana azony alaina amin'ny vokatrao azonao omena anao, dia mety miovaova.
Ny saram-pamerenana amin'ny laoniny dia mety mihatra arakaraka ny toe-javatra misy ilay baiko na nofoanana na averina ilay entana.
Raha toa ka mandefa singa mihoatra ny $ 75 ianao, dia tokony handinika fomba amam-pitaovana azo itakiana na hividianana fiantohana fandefasana. Tsy manome antoka isika fa hahazo ny zavatra naverina naverina.